Tsvaga mweya wako wemhuka nemubvunzo uyu! - Hanukeii
Tsvaga mweya wako wemhuka nemubvunzo uyu!
Vanoti kubatana kwemunhu nemasikirwo chisungo chakaoma chaizvo kudambuka. Uye izvi zvitendero zvave zvichitora kwemakore, zvinogara zvichikurudzira vanhu kuti vabatanidzane nerutivi rwavo rwechisikigo nguva dzese dzavanoda kusunungura uye kuzadza zvakare. Kunyangwe kubvira nguva dzepamberi apo mutauro wedu wainyanyo kumiririrwa nemadhirowa, ivo protagonists vaive mhuka dzaigara dzichiperekedza vakadzi nevarume mukuvandudza zviitiko zvavo.
Ichi ndicho chikonzero tsika zhinji dzichiri kuenderera nekutenda kuti tese tinotakura mukati medu 'mweya wemhuka ', izvo zvinomiririra zvimwe zvehunhu hwedu. Kunyangwe kuratidza kuti kazhinji, chikamu chemaitiro edu, zvishuwo, kuravira, zvinozivikanwa nehunhu hwemamwe mhuka dzesango uye / kana mhuka dzekumba.
Kana uchiri kusaziva kuti ndiwe ani 'mweya wemhuka ' uye iwe ungade kuzvitsvaga, mu Hanukeii Isu takagadzira ipfupi hunhu hunovhunza iyo inobatanidza zvakananga mhuka dzinonyanya kufarira dzemhuka humambo. Ready?
Simba iri nyore: Kune gumi mibvunzo yakabatana nemaitiro, manakiro uye zvishuwo. Tsamba imwe neimwe ine kukosha kwehuwandu (A = 10, B = 1, C = 2, D = 3). Kana uchinge wapedza kupindura mibvunzo, pfupisa mhinduro dzako uye mamaki ekupedzisira anotsanangura ako mweya wemhuka. UnoUnoziva here kuti chikamu chakanakisa chii? Tine nguwani dzese dzadzo!
1. Ndechipi chimwe chezvinhu zvinotevera chaunonzwa kuzivikanwa nacho:
2. Kana zvasvika kuhupenyu hwemagariro (mapato, makonzati, maresitorendi) iwe unowanzo sarudza:
A. Enda wega.
B. Endai semurume nemudzimai.
C. Enda muboka.
3. Ndezvipi zvezvinhu izvi zvaunosarudza kunge wakaronga kare:
A. Kudya kwako kwemazuva ese.
B. Hembe dzako.
C. Kubuda kwako.
Nezve kudaidzwa, ndeipi yenzvimbo dzinotevera inokwezva pfungwa dzako zvakanyanya:
A. Unyanzvi netsamba.
B. Varaidzo nefashoni.
C. Informatics, sainzi uye tekinoroji.
D. Hapana chimwe chezvataurwa pamusoro apa.
5. Iwe unowanzo fananidza zviitiko zvenguva yemberi mumusoro mako pane kubvuma chokwadi?
A. Nguva dzose.
D. Hazvina kumboitika.
Nezve ruzha rwezvinhu zvesimbi, maitiro ako anowanzo:
A. Ini handikwanise kumira pavari.
B. Ini handidi kuvateerera.
D. Handina basa nekuti ndinovateerera here kana kuti kwete.
7. Ndeapi eanotevera marangi emavara iwe aunowanzo tarisa nzira yako yekupfeka:
A. Meso machena.
B. Chikero chebhuruu.
C. Chikero chakasvibirira.
D. Kuyera kwemaruva.
Ndeupi weiyi mitambo inotevera yaunowanzo sarudza neiyo inonyanya:
D. Kuchovha bhasikoro.
9. Iyo yakakwana Svondo chirongwa chako ndeichi:
A. Kurara mukutarisa Netflix.
B. Enda unofamba mune zvakasikwa.
C. Kudya neshamwari uye / kana mhuri.
D.Kutenga nekutandara muguta.
10. Kana iwe waizofanira kusarudza mhando imwe chete yezvokudya, ndeipi yaungasarudza?
B. BBQ mbabvu.
C. Greek saladhi.
11. Ndeupi pane aya mazwi anonyatsotsanangura hunhu hwako:
A. Kushinga (Unoda kutora njodzi).
B. Wakanyarara (Unofarira kuve muyananisi uye unowanzo shushikana nezvinhu zvishoma).
C. Hazvina maturo (Unoda kuve nzvimbo yekutarisisa uye kutora nzvimbo yepakati).
D. Kuda kuziva (Unofambidzana, unofarira kuziva zvese).
12. Paunotsamwa unowanzoita:
A. Kurwisa munhu, pasina kutaura naye zvakare.
B. Kutsamwa, kungoita zvechimbi-chimbi, asi uchibvuma chikanganiso chako uye uchikumbira ruregerero.
C. Usati wataura chero chinhu chinogumbura, unoongorora mamiriro ezvinhu woedza kuyananisa.
D. Zvakaoma kwazvo kwavari kukutsamwisa.
Dai zvaive zverunyararo, taizogara tichitarisa pauri. Iwe unofarira kuona hupenyu nenzira yakapusa, zvinonhuwira zvematambudziko, kurwa kana nharo hazviende newe. Unonakidzwa nechikafu chakanaka uye zororo kupa rako zuva nezuva. Iwe hausi kuona mutambo sewakakosha kwazvo kwauri, muchokwadi, iwe unofarira kurara uye kutarisa yako aunofarira akateedzana uye marathon! Hapana dutu rinokukunda, vanokusiya pamhenderekedzo yegungwa ne piña colada uye nezuva rine zuva, ndiro zano rako rakanaka. Kune rimwe divi, iwe une huchenjeri kwazvo, unofarira tsamba uye unofarira nguva yako wega.
Iwe unoonekwa nesimba rako remuviri pamwe neakasimba masimba emukadzi. Unoda kufamba nyika uye kana uchikwanisa kuzviita wega zvinokwezva kutarisisa. Unotya zvishoma zvinhu muhupenyu nekuti une hunhu hwakasimba, kuteedzera zviroto zvako uye zvinangwa ndiwo marongero ezuva. Iwe unofarira zvemitambo uye zvekunze zviitiko, une denderedzwa diki reshamwari uye unowanzo sarudza kunakirwa nemhuri yako munzvimbo dzakanyarara, pane kuve munzvimbo nenzvimbo ine ruzha rukuru.
Uchenjeri pamusoro. Iwe unofungisisa pane zvese zvaunoita kana zvauchazoita, iwe unofunga usati waita uye zvinowanzo kuzivikanwa nevamwe vako kuti uve nenjere kana zvasvika pakuita. Izvo zvakajairika kuti nguva nenguva, vanouya kwauri kuzowana mazano. Unowanzoita wega muzviitiko zvakawanda, uye unonakidzwa nerunyararo uye nzvimbo dzakanyarara nevanhu vashoma. Iwe unonyara, asi kana iwe ukava nechivimbo iwe unowanzo kuve unonakidza uye wakavimbika, unofarira kuteerera kushamwari dzako uye kugovana nguva navo.
Iwe uri munhu anofarira kuve akaenzana, une simba rakakura kwazvo, uye izvo zvinoita kuti uve munhu akachengeteka uye akavimbika. Iwe unoda kururamisira uye chokwadi, iwe wakavimbika kushamwari dzako nevadikani. Unoda kupa rubatsiro nekutungamira kune vanhu vanozvida. Nekudaro, iwe unenge wakangwarira kana zvasvika pakuvimba nevamwe vanhu. Iwe unogara wakangwarira pa redflags izvo zvinokanganisa iwe nehama dzako dzepedyo. Makomo, mafuro nemasango inzvimbo dzako dze detox kwaunowanzo batana nemweya wako wemhuka.
Iwe unogadzira uye unofema hunyanzvi mune zvese zvaunoita. Iwe unofarira kambani, asi newewo dzimwe nguva unoda nguva uri wega kuti uwane mazano matsva. Iwe unowanzo kuve chimwe chinhu chemanzwiro uye ndege ine rudo ine basa rakakura muhupenyu hwako. Iwe unonakidzwa nekufamba uye nhandare yendege ingangove iri imwe yenzvimbo dzaunofarira. Unoda kuve mufashoni uye nguva nenguva uve pakati pekutarisisa.
Ndiwe mambokadzi wegungwa, iwe uri mumakungwa ese epasi. Iwe une nzwisisika uye unonzwisisa. Iwe unomira kunze kwehungwaru hwako, mufaro, hushamwari uye rupo. Iwe unowanzo kuita muboka, iwe unofarira kuve nehupenyu hwehupenyu hwevanhu uye vazhinji, VAKAWANDA, shamwari. Iwe unofunga nekukurumidza, asi iwe unouyawo kune mhedziso, iwe unofarira kuzvitarisira iwe pachako, iwe unowanzo kuve nehupenyu hwakanaka kwazvo.
Kana isu tichizotaura nezve hunhu uye hwepakutanga, zviri pachena kuti ndiwe! Unoda kutenderedzwa nevanhu, kuva mufashoni, kuva nezvirongwa zuva rega rega, asi hauna kana kumbobvira wazvirega uchitungamirirwa nevamwe, pachokwadi, shamwari dzako dzinowanzo kukuudza mutsara unoti: "uchiri mumwe chete" uye izvo, vashoma vanogona kutaura. Kana paine matambudziko, iwe unowanzo svetuka kana kusanganisa mukati nekuti iwe haudi chero munhu kuti acheke ako akanaka vibes. Sezvo iwe uri wekushamwaridzana nevanhu, iwe unodawo kupinda mudambudziko nguva nenguva, asi iwe unowanzo gara uchienda nazvo.
Strategist, akashinga uye akangwara. Iwe unojairira kune chero pekugara pasi pano, iwe unotarisisa uye mukadzi. Iwe ndiwe unogara uchiuya nemhinduro kumatambudziko anowanzo kuve akaomarara kune vamwe, iwe unoda kutaura uye kuve nehunyanzvi. Iwe wakanaka pabasa nekugadzira mabasa. Unonakidzwa uri wega uye unogovana nemhuri yako. Iwe wakachengeterwa nehupenyu hwako hwega. Iwe uri kuseka, kuratidza uye kumwe kwakasimba muhukama hwako.
CHIKORO CHIKURU KUNopfuura 50
Une mwana wako wemukati anogara achishandurwa, uye izvi zvakanaka, nekuti iwe unowanzoona hupenyu nenzira inonakidza uye nemagirazi ekuda kuziva anogara aripo. Iwe unowanzo kuve nerombo mune zvese zvese zvaunoita, imhaka yekuti iwe unodya yakawanda yemishenjere? Kungo kuseka, asi mutsika dzekumabvazuva zvinozivikanwa kuti bamboo inokwezva mari uye iwe une zvinangwa zvakajeka maererano nazvo. Iwe unoziva kuita muchiyero nemukati mako uye kuita mapurojekiti ayo anowanzo kuunza mabhenefiti kune vamwe, anotarisisa zvakanyanya mukuda, unofarira kudya, kurara uye… Zvakanaka, kudya. Iwe unotsigira uye hauna kuzvifunga, mimhanzi yakanaka uye hurukuro dzakadzama ZVINOFANIRA muzuva rako zuva nezuva.